ओलीजीले भ्यु टावर खोल्ने रे । त्यसमा एक अर्ब थप्यो भने सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ « Drishti News
डा. केसीले सोमबार शिक्षण अस्पतालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश
ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुमका पूर्वीभाग र इलामका मान्छेले उपचार गर्न झापा, बिराटनगर, धरान वा सिलिगुडी जानुपरिरहेको छ ।
म इलाममा मेडिकल कलेज, अस्पताल खोल्नुपर्छ भनेर दबाव दिन गएको हो । त्यो मेची अञ्चल त ओलीजीको क्षेत्र हो । झलनाथ खनालजीको हो । सुवास नेम्वाङजीको हो । यी छन् नि आफूलाई युवा नेता हो भन्छन् । जनताले दिएको तलब भत्ता खान्छन् । तर, यिनीहरु माफियाको काम गरिराखेका छन् ।
संसद, समिति, उपसमितिचाहिँ सार्वभौम हुन् रे ! अहिले के छ भनेदेखि, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे मन्त्री हुन्, चाहे सांसद हुन्, जे हुन्, अहिले उनीहरु नेपाली जनताको मालिकका रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । मालिक राजाका रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् ।
किनभने, ओली र प्रचण्डजीले कालोलाई सेतो भनिदिएदेखि त्यहाँका सबै सांसदहरु कालोलाई सेतै भन्छन् । त्यो संसद सार्वभौम हैन । ओलीजी र प्रचण्डजीले जे भने, त्यही हुने हो । र, उनीहरुले गर्ने भनेकै माफियाको काम गरिदिने हो । माफिया, बिचौलिया र दलाल । अहिले राज्य माफिया, बिचौलिया र दलालहरुले चलाइरहेका छन् ।
त्यो ठाउँमा अस्पताल बनाऔं भनेर हामी लड्छौं । त्यहाँबाट निर्वाचित गरेको सांसदले चाहिँ माफियालाई पोसेर जनतालाई धोका दिनेे ? जनताको भुँडीमा लात्ती मार्ने ? यो जनतालाई धोका दिएको हैन ? भोट दिएपछि जनताको हकहित गर्नुपर्ने हो नि । के सोझासाधा नागरिकलाई बेवकुफ बनाउने ? योगेश भट्टराईजी, भन्नोस् त ।
हामीले जुन गरिरहेका छौं, यो भनेको वास्तवमा त उनीहरुको काम हो नि । ऐन बनाऊ भनेर हामी लडिरहेका छौं । यो काम त तिनै नेतृत्व पक्षको हैन ? ती सम्झौता हामीसित गर्ने, सम्झौता तोड्ने । अनि यिनीहरु माफिया नभएर को हुन् ? यिनीहरु साम्राज्यवादी हुन् । जनतामारा, विद्यार्थीमारा हुन् । माफियावादी हुन् ।
अनमी, अहेब पढ्नलाई एसईई चाहिने हो र हेल्थ असिस्टेण्ट अनि स्टाफ नर्स पढ्न पनि एसईई नै चाहिने हो भने अब जुन पहिले डेढ वर्षको कोर्स पढ्थे, अबचाँहि तिनीहरुले साढे दुई वर्ष वा तीन वर्षवाला कोर्स पढ्न पाउँछन् । र, डेढ वर्ष पढ्नेले भन्दा अढाई वर्ष/तीन वर्ष पढ्नेले गुणस्तरीय सेवा पनि दिन्छन् ।
तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, संसदमा कतिजना सांसद छन् ? त्यसमा कतिजनाचाहिँ लड्नेखालका रहेछन् त ? लु भन्नुहोस् त तपाईहरुले ।